Gacmaha nadiifiyaha asalka ah 20 ML
Nadiifiye-gacmeedka Udgoon 45 ML
Gacmaha qoyaanka nadiifiyaha 500 ML
Nadiifiye gacaneedka OEM&ODM
75% jeermiska Khamriga
50ml 75% jeermiska Khamriga
500ml 75% jeermiska Khamriga
2.5L 75% jeermiska Khamriga
75% jeermiska Khamriga ee IBC/Drum
Jeermiska jeermiska tirtir
1 xabbo oo Alkohol/Hyamine ah tirtir
10 xabo oo Khamri/Xyaamiin ah tirtir
50 xabo oo Khamri/Xyaamiin ah tirtir
150 xabo oo Khamri/Xyaamiin ah tirtir
Ethyl Acetate (≥99.7%)
Walxaha Ceyriinka ah ee Khamriga
Gacmo nadiifiye jeel ah
Gacna nadiifiye jel leh alkohol Ethyl
Gacmaha nadiifiyaha Gel oo leh khamriga isopropyl
Jeermiska Khamriga Ethyl
Jeermiska Khamriga Ethyl oo leh Udgoon
Jeermiska Khamriga ee isopropyl
Jeermiska Khamriga ee isopropyl ee udgoon
Saabuunta Gacanta Mousse
Ethanol waa iskudhis organic ah, kaas oo caanaha kiimikaadkiisu yahay CH3CH2OH ama C2H5OH, caanaha molecular waa C2H6O, sida caadiga ah loo yaqaan khamriga.
Ethanol waa iskudhis organic ah, kaas oo caanaha kiimikaadkiisu yahay CH3CH2OH ama C2H5OH, caanaha molecular waa C2H6O, sida caadiga ah loo yaqaan khamriga. Ethanol waa dareere hufan oo aan midab lahayn oo aan isbeddelayn heerkulka qolka iyo cadaadiska, sunta hoose, dareeraha saafiga ah si toos ah looma cabbi karo. Biyo-biyoodka...
Ethanol waa dareere hufan oo aan midab lahayn oo aan isbeddelayn heerkulka qolka iyo cadaadiska, sunta hoose, dareeraha saafiga ah si toos ah looma cabbi karo. Xalka aqueous ee ethanol wuxuu leeyahay udgoonka khamriga, iyo wax yar oo xanaaqa, dhadhan macaan. Ethanol waa guban kara, uumigiisuna wuxuu samayn karaa isku-dar walxaha qarxa...
COVID-19 wuxuu noolaan karaa toddobaadyo ilaa bilo laga jaray 1 ilaa 10 darajo. Maanta daawashada diiradda
by admin 21-02-24
Ilaa intee ayuu Coronavirus ku noolaan karaa xaaladaha qaboojinta? Wu Zunyou: Mid waa xadiga wasakhowga, ta labaadna waa heer kulku waa inta u dhaxaysa -1°C iyo -10°C, fayrasyada sida COVID-19 waxa ay noolaan karaan dhawr toddobaad ilaa dhawr bilood. Markaa, ma sii deyn kartid jeermiska jeermiska maalinlaha ah. 75% khamriga
Sidee loo doortaa ka-hortagga bakteeriyada, nadiifinta, iyo jeermiska nadiifiyaha gacmaha?
by admin 20-12-03
U fiirso baakooyinka marka aad iibsanayso gacmo nadiifiyaha. Guud ahaan, waxa ku jira aalkolada ayaa lagu calaamadeeyay. Midka ugu fiican waa 75%. Laguma talinayo in la doorto 90% ama 95% alkohol-ka-fiirsashada sababtoo ah fiirsashada sare waxay sameyn doontaa pro ...
Mabda'a jeermiska khamriga
Khamriga oo awood weyn u leh inuu galo xuubka dusha bakteeriyada oo uu galo gudaha bakteeriyada. Dila bakteeriyada by Fuuqbaxa, xinjirowga iyo diidista borotiinada ka kooban aasaaska nolosha bakteeriyada. Fayrasku wuxuu ka kooban yahay lammaane hidde...
Gobolka Shanxi wuxuu si buuxda u dhiirrigelin doonaa shidaalka ethanol ee baabuurta laga bilaabo 2020
Waxaa la sheegay in si loo sii wanaajiyo qaab dhismeedka tamarta, loo yareeyo wasakhowga qiiqa baabuurta, loona wanaajiyo deegaanka deegaanka, laga bilaabo sanadkan, gobolkeenu wuxuu si firfircoon oo joogto ah u horumarin doonaa isticmaalka shidaalka ethanol ee gaadiidka gobolka oo dhan si waafaqsan. .
Maamulka Tamarta Qaranka ayaa baaraya kor u qaadista iyo isticmaalka shidaalka ethanol ee baabuurta (Apr. 10th, 2019)
Ka dib Febraayo 26, 2019, Maamulka Tamarta Qaranka ayaa qabtay dood cilmiyeed ku saabsan shirkadaha biofuel ethanol ee Beijing si ay u dhagaystaan ​​fikradaha iyo soo jeedinta shirkadaha; Horaantii bishii Maarso, Waaxda Guud ee Maamulka Tamarta Qaranka ayaa soo saartay wargelin...
Cinwaanka: Room1602 Vanke Center, No.970 Nanning Rd., Degmada Xuhui, Shanghai 200235 (SH Office)
Tel: 0086 18821253359